छात्रवृत्तीहरु/प्रायः सोधिने प्रश्नहरु - Wikimania 2014 in London
छात्रवृत्तीहरु/प्रायः सोधिने प्रश्नहरु
This page isatranslated version of the page Scholarships/FAQ and the translation is 59% complete.
छात्रवृत्ती कार्यक्रम सँग सम्बन्धीत प्रायः सोधिने प्रश्नहरु तथा विकिमेनिय २०१४ को सन्दर्भमा तयार गरिएको जवाफको सुची तल रहेकोछ ।
यदि तपाईको प्रश्नको जवाफ यहाँ फेला पार्नु भएन भने कृपया इमेल गर्नु होस वा वार्तालाप:छात्रवृत्तीमा जानकारी छोड्नु होला।
३ छात्रवृत्ती आवेदन लेख्ने
४ छात्रवृत्रीको मान्यता तथा सोधभर्ता प्रक्रिया
५ साझेदार छात्रवृत्तीहरु
प्रः विकिपिडिया २०१४ छात्रवृत्ती भनेको के हो?
उः छात्रवृत्ती लन्डनमासन् २०१४ अगस्ट ६ देखि ऐ १० सम्ममा हुन गई रहेको विकिमेनिया २०१४ मा भाग लिनको लागी व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ । यो विकिमेडिया संस्थान दिईने यस रकमले भ्रमण, बसोबास, तथा दर्ता खर्चलाई व्यहोर्ने छ ।
प्रः के सबै छात्रवृत्तीहरु विकिपिडिया संस्थानले दिने हो?
उः होइन, केही विकिमेडियाका साझेदार संस्थाहरु जस्तै च्यापटर्स तथा थेमाटिक संस्थाकहरु हरुले पनि आफ्नै छात्रवृत्ती प्रदान गरी रहेकव छन् – यस सम्बन्धमा थप जानकारीको लागी हेर्नुहोस् #साझेदार छात्रवृत्तीहरु।
प्रः विकिपिडिया संस्थान छात्रवृत्तीमा कसले आवेदन हाल्न पाउने छन्?
उः जो कोहीले पनि आवेदन दिन सक्दछन् । तर छात्रवृत्ती भने निश्चित प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र प्रदान गरिनेछ – हेर्नु होस् #छात्रवृत्ती योग्यता।
प्रः विकिपिडिया संस्थान छात्रवृत्तीमा कहाँबाट आवेदन हाल्न सकिन्छ?
उः हेर्नु होस् छात्रवृत्ती#पेश.
प्रः आवेदन पेश गर्ने अन्तिम म्याद कहिले छ? यसको निर्णय कहिले प्रकाशित हुन्छ?
उः विकिमेडिया संस्थानको छात्रवृत्तीको आवेदन हाल्ने तथा पुनरावलोकलन प्रक्रिया सम्बन्धमा सम्पूर्ण समययोजना हेर्नु होस छात्रवृत्तीहरु#महत्वपूर्ण मितिहरु
प्रः विकिपिडिया संस्थान छात्रवृत्तीका आवेदकलाई कसरी जानकारी पठाईन्छ?
प्रः विकिपिडिया संस्थान छात्रवृत्तीको निर्णय कुन आधारमा लिईन्छ?
प्रः कति वटा विकिपिडिया संस्थान छात्रवृत्तीहरु रहेका छन्?
‍‍== छात्रवृत्तीका प्रकारहरु ==
प्रः कस्ता प्रकृतीका छात्रवृत्तीहरु उपलब्ध छन्?
प्रः विकिपिडिया संस्थानले किन अर्ध छात्रवृत्ती प्रदान नगरेको होला?
प्रः के देश अनुसारको कुनै छात्रवृत्ती प्रदान गरिने छ?
प्रः विकिमेनिया २०१४ मा सहभागि हुन विकिपिडिया संस्थान छात्रवृत्ती पाउन कस्ता व्यक्ति योग्य हुनेछ?
प्रः उमेरको कुनै हदवन्दी छ?
प्रः के आवेदनहरुले आवेदन पेश गर्नु अगाडी कुनै शर्त तथा नियमा मान्नु पर्नेछ?
प्रः यदी मैले आफै विकिमेडियामा भाग लिने खर्च ब्यहोर्न सक्छु भने मैले आवेदन भर्दा हुन्छ?
छात्रवृत्ती आवेदन लेख्ने
प्रः के आवेदन अग्रेजी भाषामाले पेश गर्नु पर्ने हुन्छ?
प्रः के आवेदकले आवेदन फारममा भएको सम्पूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ दिनु पर्दछ?
प्रः आवेदन फारमले किन व्यक्तिगत जानकारी माग गरिरहेको छ?
उः छात्रवृत्ती वाँडफाँडमा तथा विविधता अनुगमनमा सहजता ल्याउनको लागी माग गरिएको हो । याद गर्नु होला छनौट प्रक्रिया मा उल्लेख गरिएको आधार अनुसार छनौट गरिनेछ ।
प्रः आवेदन फारममा कुन विकिमेडिया परियोजनाको युजरनेम लेख्नु पर्ने हुन्छ?
प्रः के आवेदकले आफ्नो जवाफको प्रमाणको रुपमा वेभपेजको लिङ्क उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ?
उः यदी उपयुक्त छ भने उपलब्ध गराउनु पर्दछ । पुनरावलोकनकर्ताहरुले सबै उपलब्ध सान्दर्भिक जानकारीलाई ध्यानमा राखि आवेदन पुनरावलोकन गर्नेछन् ।
प्रः प्रश्नको जवाफ लेख्दा कति लेख्नु पर्दछ?
छात्रवृत्रीको मान्यता तथा सोधभर्ता प्रक्रिया
प्रः विकिपिडिया संस्थान छात्रवृत्तीले के को लागी भुक्तानी गर्दैछ?
प्रः विकिमेनिया संस्थान छात्रवृत्तीमा कस्ता खालका खर्चहरु कभर गर्दैन?
प्रः विकिमेडिया संस्थानको छात्रवृत्ती पाउने व्यक्तिले आफै भ्रमण व्यवस्था मिलाई सोधभर्ना लिने हो?
उः होइन, आवेदनफारम पेश गर्दाको शर्त मा भए अनुसार (हेर्नु होस् छात्रवृत्तीहरु#छात्रवृत्ती योग्यता), सबै आवेदकहरुले विकिमेडिया संस्थानले उपलब्ध गराएको टिकट बुकिङ्ग सेवालाई मान्नु पर्ने हुन्छ ।
उः मैले कही विकिमेनियामा दर्ता गर्न सक्छु ?
प्रः के विकिमेडिया संस्थानले भिमा लिनमा सहयोग गर्नेछ?
प्रः विकिमेनिया २०१४ मा सहभागि हुन कुन साझेदारहरुले छात्रवृत्ती उपलब्ध गराई रहेका छन्?
उः यो भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो । पूर्ण सुची हेर्नको छात्रवृत्तीहरु#साझेदार छात्रवृत्तीहरु लागी हेर्नु होस
उः यदी साझेदारले छुट्टै आवेदन माग गरेमा, त्यो बुझाउने अन्तिम म्याद कहिले सम्म हुन्छ ?
उः त्यो कुन साझेदार हो भन्नेमा भर पर्दछ – हेर्नु होस् छात्रवृत्तीहरु#साझेदार छात्रवृत्तीहरु.
प्रः साझेदार छात्रवृत्तीको लागी कस्ता व्यक्ति योग्य हुन्छन्?
प्रः साझेदारहरुले आफुले दिने छात्रवृत्तीको लागी कसरी निर्णय गर्दछन्?
प्रः साझेदारको छात्रवृत्ती विकिपिडिया संस्थान छात्रवृत्ती भन्दा कसरी फरक छ?
उः तिनीहरुले पनि उस्तै वा मिल्दो खर्चहरु नै व्यहोर्ने छन् तर त्यो साझेदार पिच्छे फरक पर्न सक्दछ – हेर्नु होस् छात्रवृत्तीहरु#साझेदार छात्रवृत्तीहरु।
Retrieved from "https://wikimania2014.wikimedia.org/w/index.php?title=Scholarships/FAQ/ne&oldid=28207"